my kitchen my life: ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ဟင်းပွဲ
ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ဟင်းပွဲ
scellini di asticeefiletto di angus "dolce vita" su crema di dragoncelloepurea di mais
medallion of rock lobster & angus beef medallion, young green asparagus spears, dust of polenta hearts and tarragon sauce.
Ingredients : rocky lobster, beef fillet, asparagus, polenta, extra virgin olive oil, tarragon, pine seeds.
Method : incorporate the polenta flour in boiling salty water, keep on stirring for one hour until the polenta is cooked. Let the polenta cool down and cut it in on heart shapes.
Poach the asparagus.
Blend the tarragon adding olive oil and pine seeds until you getasmooth foam.
Grill the lobster, grill the beef fillet and poach the asparagus in extra virgin olive oil.
Angus အန်းဂုခ်ျ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဟိုတယ်ကတော့ US ကလာတဲ့ အသားကို Angus meat လို့ ခေါ်ပါတယ်။ local ကတော့ ဘာမှ မထွက်နိုင်ဘူးလေ။ အသားအများစုကတော့ Australian , Brazil, poland, netherland, India, Spain, New Zealand စတဲ့ နိုင်ငံတွေက ယူတာဖြစ်တယ်။ beef , lamb တို့ကတော့ Australian ကလာတာများတယ်။ Angus အသား က နု့ညံ့တယ် ဈေး လည်း ကြီးတယ်။အသား ထားပုံ ထားနည်းကလည်း လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင် အသားက သွေးတွေ တစက်စက်ကျ ပြီး မြင်မကောင်း ရူ့မကောင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
Polenta ပိုလန်တာ ဆိုတာကတော့ အ၀ါရောင် အဆင်းရှိတဲ့ cornmeal တမျိုးပါ။ Italian စကားဖြစ်ပါတယ်။ polenta ကို butter နဲ့ ဆားထဲ့ ထားတဲ့ ရေပူနဲ့ ရော မွှေပြီး တစ်လက်မ အထူ လောက် ပြားထားပါတယ်။ အေး သွား ရင် အသည်းပုံ မို နဲ့ အပေါ်ကနေ ဖိချလိုက်တာပါ။
tarragon sauce ကတော့ တာရဂွန် ( tarragon ) ကို pine seeds , olive တို့နဲ့ ရောပြီး blend လုပ်ထားတာပါ။
ချစ်သူများ နေ့က ဟင်းပွဲပါ အီတလီ chef အသစ် လက်စွမ်းပြထားတာ။ အားလုံးကို တော့ မရိုက်လိုက်နိုင်ဘူး။ ဟူးးး
Posted by leo mark at 11:22 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 13, 2011 at 3:27 AM
leo March 14, 2011 at 12:22 AM
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။